Buugaag ku qoran luqado kala duwan - Söderhamns kommun Gamla Webben
| Maktabadda magaalada
| Buugaag ku qoran luqado kala duwan
Halkii buugg badanaa waxaad amaahan kartaa afar todobaad. Filimada iyo wargeysyada waxaa ka amaahan kartaa in kayar afar todobaad. Markaaad shey ka amaahaneeyso waxaad ka heleysaa rasiid. Rasiidkaas oo ku qoran waqtiga aad amaahatay.
Mar kasta oo ay furuntahay maktabadda waxaa joogo shaqaalo kaa caawiya waxa aad u baahantay isla markaas sida buugaagta, cajaladaha vidiyoga, xogta iyo macluumaad kale.
Waxaan hayaan buugaag ku qoran luuqado badan oo kala duwan. Waxaa kale oo aad u gudbin kartaa talooyin sida buugaagta aad xiiseeso si ay u soo gadaan. Waxaan hayaan wargeysyo leh luqado kala duwan. Waxa kale oo aad ka akhrisan kartaa wargeysyada computerka. Shaqaalaha ayaa ku tusi kara sida qofka uu u istimaalo.
Waxaan hayaan buugaagta liisanka oo leh dhowr luqadood oo kala duwan sida Ingiriisi, Ruush, Carabi, Faarisi, iwm. Sidoo kale waa ay fududahay in la akhriyo buuggagta liisanka ee Swedishka ku qoran. Waxaa kale oo ay leeyahiin dhowr buugaag oo loogu talagalay kuwa raba in ay bartaan luqada Iswiidhishka. Dad badan ayaa doonaya in ay amaahdaan buugaagta kuwaaso oo si aad ah ugu baahan, sidaas darteed waxaan leenahay keydad buugaag ah oo kuwa aad u baahantahay .
Habab kala duwan oo loo dego External link, opens in new window.
Ka fikirida hoyga External link, opens in new window.
Sharciyada farxad ku noolaanta External link, opens in new window.
Leysin gaari wedid Swiidhan gudeheeda External link, opens in new window.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan ururada External link, opens in new window.
Ka feker sidan macaamilka External link, opens in new window.
Film: Diwaangalinta bulshada External link, opens in new window.
Haddii aad lumiso ama si khalad ah u burburiso waxa aad amaahatay, waa in aad bixasaa qiimahooda.
Waa imisa qiimaha: External link, opens in new window.
La xiriir maktabadda
Wac 0270-755 10
Ama u dir Email